157 thoughts on “Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni”
Ukuphupha umuntu osashona esebenza kusho ukuthini
Kusho ukuthini ukuphupha nabazali bakho abangasekho nehleli nonke ndawonye kumnandi kanye nesoka lakho
Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngomndeni nezihlobo
Ukuphupha ufake ubuhlalo bezangoma
31/12/2021 at 08:38
Kuchazani ukuphupha umuntu owawu thandana naye ephila ethi akaze washona??
Ngiphuphe ngilele by the road side then ngavuka kungani nginamahloni and I was greeted by umuntu engafunda naye ePrimary osewadlulayo emhlabeni ekhuluma amazwi okuthi she didn’t die, she was sleeping nje. Then mina I started to fix my blankets as if preparing to go with the primary school friend who passed on
Cofa lapha ukuthola ulwazi Amaphupho ngabangane
Kuchazani ukuphupha ngi guqe ezinyaweni za gogo wami ongasekho emhlabeni.
Cofa lapha ukuthola ulwazi Amaphupho ngekhehla noma isalukwazi
24/11/2021 at 04:43
Ukuphupha uphunyelw izinyo ulinike owakini ongasekho kuchazani
Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngemilomo
Ukuphupha inkomo igwaza imfowenu ophe igazi kodwa engafi aphile. Kuchazani
Cofa lapha ukuthola ulwazi Amaphupho ngegazi nokopha
Becela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha umama ka muntu othandana naye, kodwa futhi umama wakhe sewashona
Cofa lapha ukuthola ulwazi Amaphupho ngomamezala
Ngicela ukubuza ukuphupha ubaba wam ongasekho emhlabeni ngimphupha engath ugwaziwe entloko egwazelwa khona endlini ekhaya then kube sengathi siyambona manje sifuna ukumthoba ngoba Kade opha kuchaza ukuthini
Ngibingelele. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uukuphupha ugogo ehlakulela amadumbe ensimini yakhe futhi amadumbe akhe abukeka eluhlaza emahle. Mangifika khona athi usekhathele emva kwalokho athule anyamalale.
Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngokuhlakula
Ngiphuphe isoka lami likhala licabanga ukuth ngiyalijolela,umama walo (ongasekho) edinwe egane unwabu,kuchaze ukuthini lokho?
Cofa lapha ukuthola incazelo Amaphupho ngokuzwa ukukhala
Ngicela ukbuza kushobi ukuphupha uhamba nomamkhulu wakho okade eyisangoma, ekuxoxela into embi ayenzile mase ethi bazombulala, bavede banthathe bambulale ngempela bamsike emqaleni phamb kwakho and before bemubulale uye wakhumula iziphandla nobuhlalo bakhe wanginika bona kanye ne phone. Mase ngakhala sebembulalisa okwe mbuzi. Sewashona yena vese and uyafika emaphushwen am, abuye afike ethuli abuue afike ediniwe ekhulumisa mina ngedwa🥺
Ukuphupha umutu wasona ubona ethuneni lakhe
Cofa lapha ukuthola impendulo Amaphupho ngamathuna